2020-04-11 @ 01:24 in Ankapobeny
Fanontaniana ho an'ny rehetra io raha mahita ny zava-mitranga hatramin'ny nanombohan'ny krizy ka hatramin'izao fotoana izao. Fanontaniana mametraka fisalasalana amin'izay tokony atao sy ny tsy tokony atao ary mampanontany ihany koa amin'izay ataon'ny eo amin'ny fitondrana.
Mariho sahady mba tsy handisoana ilay fampieritreretana etoana fa firenena maro no mampihatra ilay fihibohana sady tsy maintsy mihevitra izay hanampiana ny vahoakany hampihatra izany fihibohana izany ho mora kokoa. Tsy maintsy jerena ny sokajin'olona maro an'isa sy ny hatao hanampiana ireo sokajin'olona ireo farafahakeliny fa ny sokajin'olona rehetra no tokony ampiana avokoa. Mariho ihany koa fa mety mifampitohy amin'ireo hevitra efa navoakako bilaogy ihany koa ny soratra etoana.
Tamin'ny lahatsoratra tamin'ny 3 avrily 2020 mitondra ny lohateny hoe "Hanohy fihibohana sa tsia?" aho efa nanoratra ilay hoe fahadisoana voalohany nataon'ny mpitondra nametraka ny toekarena ho ambonin'ny aina, hoy aho tamin'izany, tamin'ny mbola nanomezana fotoana ireo avy any ivelany hiditra eto an-tanindrazana... ary notohizako toy izao: "Niezaka ny nanarina izy avy eo tamin'ny fanakatonana ny tanàna na ny faritra tamin'ny hafa... Dia azo atao ve ny mihevitra fa hiverina mankany amin'ny fahadisoana indray ny mpitondra rehefa nahazo lesona tamin'izay nitranga teo aloha sy raha mijery ny zavamisy manerantany?" Ny nahavariana dia nidirany tokoa ilay fahadisoana namela ny olona "hody any amin'ny misy azy avy" rehefa 82 ny isan'ny olona tratran'ny Covid-19 sady efa nisy ireo olona tsy nivoaka teto Madagasikara no efa tratrany (ity tranga ity no tena mampidi-doza kokoa satria efa tsy tambo ho fantatra intsony ireo olona hafa efa namindràny).
Lazaina fa mijery ny mahaolona izy tamin'izany fotoana izany fa be ireo tafahitsoka tao an-drenivohitra na tany amin'ny faritra hafa. Maro ireo nangataka mba tsy hotanterahana izany fampodiana izany saingy tsy noraharahiana izany fiangaviana izany. Nisinisy amin'izay ary ireo faritra nanapa-kevitra hiaro ny faritra misy azy izay tsy mbola nidiran'ity Covid-19 ity. Fepetra nokasaina hanokana-monina ao anatin'ny fotoana voafaritra ireo olona rehetra hiditra ao amin'ny faritra, saingy nodidian'ny taty amin'ny foibe fa tsy azo atao izany. Didy niteraka alahelo tamin'ireo nihevitra ny hiaro ny faritra sy ny mponina ao aminy. Tonga amin'izay ny fanontaniana hoe tena iniana aely mihitsy ve izany ilay aretina sa inona no tanjona amin'izany?
Ny tena sampona tamin'ilay zavatra dia ny fomba nanatanterahana izany fampodiana izany izay voafaritra ho telo andro. Nitakiana hameno taratasy fangatahana ireo olona. Tsy nampoizin-dry zareo anefa ny firohotan'ireo olona an-jatony, mety ho amana arivony akory aza, namonjy ireny toeram-piantsonana ireny. Difotra tanteraka ry zareo mpikarakara hany ka naverina tamin'ny fomba teo aloha ihany ny fakana ny mombamomba ireo mpandeha. Namory olona maro dia maro indray ry zareo tamin'io fotoana io. Ny sarandalana lafo dia lafo nefa tsy nampitoviana tamin'ireo mandeha voromby ny fepetra amin'ny fitiliana feno ireo mpandeha. Fitsapana hafanana ihany no natao tamin'ireo handeha fiara, ary ireo mikohaka dia najanona avy hatrany na nasaina tamin'ny toerana iray efa miandry azy ireo. Eo amin'ny politika anefa ny toe-javatra rehetra tsy misy izany kisendrasendra izany, ary tsy mikaonty ihany koa ny hoe tsi-fahaiza-mitantana fa fomba fitadiavam-bola no tena ao ambadika.
Efa nanoratra aho tao amin'ny lahatsoratra talohan'ity eto ity fa miova ny fomba fijery rehefa nandre ny fanazavan'ny FTA Marc Ravalomanana tao amin'ny Real TV, izay niharan'ny fisomparana moa taorian'io resadresaka io. Efa ao an-tsaina ny hoe hay azo atao tsara ny mitsinjara ny fanampiana ho an'ny rehetra ao amin'ny faritra rehetra (Analamanga sy Toamasina I sy II izany niampy an'i Fianarantsoa moa amin'izao fotoana izao) tratran'ny fihibohana noho ireo volabe avy any ivelany. Tsy nahita avaly tamin'izay nolazain'ny FTA ny tao amin'ny fitondrana, na tsy mbola nandre izany valiny aho aloha. Ny FTA Ratsiraka Didier Ignace ihany no hita nampitenenina hamaly ankolaka sady nanokana ny karama fandrainy amin'ny maha-FTA azy ho an'ireo sokajin'ny mpitandro ny filaminana sy mpitsabo miady amin'ity areti-mandringana ity. Ny setriny taty aoriana dia izay nataony indray ka tsy inona fa io famelana olona hiely any amin'ny faritra maro (raha tsy izy rehetra) eto Madagasikara io. Tahaka ny hoe sanatria atao izay hampisy viriosy an'i Madagasikara iray manontolo.
Dia avy koa ny zavatra iray izay nampalaza vetivety an'i Madagasikara indray. Tao amin'ny dinidinika iray ny Filoha Rajoelina no nilaza ny amin'ny hananganana ozinina hamokatra fanafody enti-miady amin'ity areti-mandringana ity. Toy ny mametraka tsy ankiteniteny ny hoe efa hita anie izany ny fanafodiny ka inona intsony ny mbola ihibohana fa vokarina betsaka ny fanafody itsaboana izay rehetra marary. Nefa taorian'io filazana io toa nikatso tampoka ny isan'ny sitrana tamin'ilay aretina. Io fampanantenana io sy ny famerimberenana hatrany fa voafehy ny aretina no mahatonga ny olona ho feno fiheverana fa toa efa tsy misy intsony ny antony ihibohana.
Mandritra izany fotoana izany koa ireo mpitondra sasany, mivoaka an-dalambe mizara arovava amin'ireo tsy manatontosa ny fihibohana - mbola ilay politikan'ny "spectacle" hatrany - nefa tsy hitan'ireo izay manao ny fihibohana. Mbola mampametraka ihany koa fa tsy maninona ny mivoaka ny trano rehefa manao ilay arovava sy orona. Politikan'ny mba ho hita hoe mizara ve? Ilay fizarana entana eny amin'ny tsenamora moa mbola mitohy soa aman-tsara ihany ary mahavory olona maro mifanety tokoa. Ireny fihetsika ireno no mahatonga ny maro ho tsy resy lahatra amin'ny tokony hanatanterahana ny fihibohana, izay tokony hotohizan'izay manao izany, rehefa mbola mifanohitra amin'izay tenenin'ny mpitondra hatrany no ataony. Tamin'ny fotoana nanoratana dia efa mihoatra ny zato ankehitriny ny isan'ny olona ofisialy tratran'ny Covid-19.
1 2 3 ... 38 39 40 Manaraka»